၈၈ ရဲ့ နော်မန်: ကမ်းလာတဲ့ စာရွက်ကလေးများ
သမီး . . .
အဲသည့်မနက်က ဖေဖေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကနေ ထွက်လာခဲ့ပြီးလှည့်တန်းဈေးဘက်ကို သွားစရာ ရှိတာနဲ့ပြည်လမ်းကို ဖြတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်ကို တစ်ခါပြန်တွေ့ရပြန်တာပါပဲ။ အသက်ကတော့ ခြောက်ဆယ်နီးနီး၊ ဒါမှမဟုတ် ခြောက်ဆယ်စွန်းစွန်းလောက်တော့ ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့။
ဆံပင်တိုတိုပါးပါးကတော်တော်လေးဖြူနေပါပြီ။ လူကလည်းပါးပါးလျားလျားပါပဲ။ အင်္ကျီလက်တို အကွက်ကလေးနဲ့၊ ချည်လုံချည် အနွမ်းကလေးနဲ့၊ သူ့ကြည့်ရတာ ပင်စင်စားတွေ၊ ဘာတွေများလား မသိပါဘူး သမီးရယ်။
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ သမီးရယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ လက်ကမ်းကြော်ငြာစာရွက်ကလေးတွေနဲ့။ လမ်းသွားလမ်း လာတွေကို သူလက်လှမ်းမီသလောက် တစ်ရွက်ချင်းတစ်ရွက်ချင်း ကမ်းနေလိုက်တာ။ လူတိုင်းလိုလို ကသူကမ်းလာတဲ့ ကြော်ငြာစာရွက်ကလေးတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ယူသွားလိုက်ကြတာပါပဲ။ အင်း . . . ဖေဖေကလည်း တစ်ရွက်ပေါ့။
ကွန်ပျူတာသင်တန်း ကြော်ငြာစာရွက်ကလေးသမီးရဲ့။ Computer Basic ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာအခြေခံ သင်တန်းရယ်၊ DTP လို့ဆိုတဲ့ ရုံးသုံးစာစီစာရိုက်သင်တန်းရယ်၊ Graphic Designer လို့ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဒီဇိုင်းသင်တန်းရယ်၊ နောက် Internet နဲ့ E-mail သင်တန်းတဲ့၊ Auto CAD တဲ့စုံနေတာပါပဲ။ သင်တန်း စမယ့်ရက်၊ သင်တန်းရှိရာလိပ်စာ၊ နောက်ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်း သင်တန်းကြေးလျှော့မယ်ဆိုတာတွေ လည်း သည်လက်ကမ်းကြော်ငြာစာရွက်ကလေးထဲမှာ ပါ,ပါရဲ့။
ဖေဖေလည်း သည်ကြော်ငြာစာရွက်ကလေးဖတ်ပြီး သင့်ရာလျော်ရာစာအုပ်တစ်အုပ်ကြား ညှပ်ထား လိုက်တာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း အမှိုက်ပုံးထဲပေါ့။ မကြာခဏဆိုသလို သည်လိုလက်ကမ်း ကြော်ငြာကမ်းသူတွေက ရှိတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ လှည်းတန်းလမ်းဆုံတစ်ဝိုက်မှာ တစ်ခါတစ် လေပေါ်လာတတ်တဲ့ ဦးလေးကြီးကလည်းမြို့တော်ရဲ့ လက်ကမ်းကြော်ငြာ ပေးဝေးသူတွေထဲက တစ်ယောက်ပဲပေါ့။
သည်လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေကလည်း အမျိုးအစားကိုစုံနေတာပါပဲ။ Beauty Parlour လို့ခေါ်တဲ့အလှ ပြင်ဆိုင်ကြော်ငြာတွေလည်း ပါရဲ့။ ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းတွေရဲ့ ကြော်ငြာတွေလည်းပါရဲ့။ ပြီးတော့ ဘုရားဖူးကားကြော်ငြာ၊ အလုပ်သစ်အကိုင်သစ်ကြော်ငြာ စုံနေတာပါပဲသမီးရယ်။
မြို့တော်ရဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာ၊ ကျူရှင်လှေကား အဆင်းအတက်မှာ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ၊ ဈေးအဝင်ဝမှာ တစ်ဝမ်းတစ်ခါးအတွက် လုပ်ငန်းမျိုးစုံကို အသိပေးနေတဲ့ သူတွေလေ။
သမီးကိုဖေဖေပြောပြချင်တဲ့နေ့က ဆူးလေဘုရားလမ်းမကြီးပေါ်မှာ သမီးရဲ့။ ခုံးကျော်တံတားကြီးပေါ် မှာလေ။ ဖေဖေလှေကားထိပ်မှာ ကြော်ငြာကမ်းတဲ့ လူငယ်ကလေးနှစ်ယောက်၊ ကြော်ငြာကိုယ်စီကမ်း လို့၊ ကိုယ်အမူအရာက ယို့ယို့ကျိုးကျိုးနဲ့၊ ဘာကြော်ငြာ အမျိုးအစားမှန်းတော့ ဖေဖေလည်းမသိဘူးပေါ့ သမီးရယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ ဖေဖေလှမ်းယူလိုက်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ချို့သောလူအများစုကိုတော့ ဖေဖေအံ့သြသွားမိတယ်။ ကြော်ငြာကိုတော့ယူလိုက်တယ် ပေါ့သမီးရယ်။ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းဆိုမှချက်ချင်း၊ အခုချက်ချင်း ခြေတစ်လှမ်းလွန်ပြီးတာနဲ့ တံတားပေါ် ပစ်ချလွှင့်ပစ်လိုက်တာပါပဲ။ မိုးရေစပ်စပ်မှာ ကြော်ငြာစာရွက်ကလေးတွေ တံတားကြမ်းပြင်အနှံ့ ပြန့်ကျဲ တွယ်ကပ်လို့၊ မဖတ်ဘဲလွှင့်ပစ်ခံလိုက်ရတဲ့ လက်ကမ်းကြော်ငြာစာရွက်ကလေးတွေကိုယ်စား ဖေဖေ နာကျင်လိုက်ရတာ။ ကြော်ငြာကမ်းသူကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးထဲက အသိအမှတ်အပြုမခံရလို့ သိမ်ငယ်သွားတဲ့အရိပ်ကို ဖေဖေတွေ့လိုက်ရသလိုပဲ။ ယူတော့ယူလိုက်ပါရဲ့။ ဆတ်ခနဲဆို လွှင့်ပစ် လိုက်၊ ဆတ်ခနဲလွှင့်အစ်လိုက်နဲ့။ တချို့ချို့သောလူတွေပေါ့။
သမီးရယ် . . .
အစည်းအဝေး တစ်ခုလို့ပဲဆိုပါတော့။ လူတစ်ယောက်ထပြီး တင်ပြလာတာကို ဖေဖေတို့သမီးတို့ သဘောတူချင်မှ သဘောတူမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူပြောနေတာကိုတော့ ဖေဖေတို့နားထောင်ရမယ်လေ။ မပြောနဲ့လို့ ပိတ်ပင်တာမျိုး၊ နားမထောင်ဘဲနေတာမျိုးတော့ မလုပ်အပ်ဘူးလို့ ဖေဖေထင်မိတာပါပဲ။ ဆိုကြပါစို့ လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ဆီကနေ မေတ္တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေကြေး၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုတောင်းခံလာတာမျိုး ဆိုပါတော့။ ငြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါကဖေဖေတို့ သမီးတို့ရဲ့ အခွင့်အရေး၊ ဒါပေမဲ့သူပြောခွင့်၊ သူတောင်းဆိုခွင့်ကိုတော့ ဖေဖေတို့အသိအမှတ်ပြုရ၊ လေးစားရပေမပေါ့။
သိစေချင်လို့ကမ်းလာတဲ့ ကြော်ငြာကလေးကိုယူပြီးရင် သင့်လျော်တဲ့နေရာတစ်နေရာ ဖတ်လိုက်ပေါ့။ မဖတ်ချင်တဲ့အဆုံး မမြင်ကွယ်ရာမှာ လွှင့်ပစ်လိုက်ပေါ့။ ခုတော့ကမ်းသူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာတင် လွှင့်ပစ် လိုက်တာမျိုးကတော့ . . . ။
ဖေဖေကတော့ ရန်ကုန်မြို့အနှံ့လျှောက်သွား၊ ပေးလာတဲ့လက်ကမ်းကြော်ငြာကလေးတွေကို လှမ်းယူ၊ ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလား မဆိုင်သလားဖတ်ကြည့်။ နောက်တော့လည်း လွှင့်ပစ်တာပဲပေါ့ သမီး ရယ်။ တစ်ခုပါပဲ။ သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ သူတို့ရှေ့မှာတော့ ဘယ် တော့မှ ဖေဖေလွှင့်မပစ်ဘူး။
ဟောကြည့် . . . လူတစ်ယောက်က ဖေ့ဖေ့ကိုကြော်ငြာကလေးတစ်ရွက် လှမ်းပေးနေပြန်ပါပြီ။ ကိုယ် ကလေးကို ယို့လို့၊ မျက်နှာလေးကို အောက်ချလို့၊ ဖေဖေကတော့ လှမ်းပြီးယူလိုက်ပြန်ပါပြီသမီးရယ်။
source by : http://www.maukkha.org